အနက်ရောင် အိပ်မက်တစ်ခု၏ ၀ိဥာဉ်များ...: October 2007
Posted by Pyiet Oo Aung at 11:53 PM 1 comment:
Posted by Pyiet Oo Aung at 9:53 PM 1 comment:
မတုန့်ပြန်ပါနဲ့ ကွာ…။ ။
Posted by Pyiet Oo Aung at 7:30 PM No comments:
မောင်နဲ့ပတ်သတ်လာရင် အမြဲတမ်း အပေါ်စီးကနေခြင်တယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးကို ပြောတာမလား "ချစ်လေး"....?
Posted by Pyiet Oo Aung at 5:20 AM 1 comment:
WHO IS SQUEEZING OUR WORLD????
Posted by Pyiet Oo Aung at 5:15 AM No comments:
YOUR MONEY OR YOUR LIFE????
Posted by Pyiet Oo Aung at 5:13 AM No comments:
Posted by Pyiet Oo Aung at 5:08 AM No comments:
Posted by Pyiet Oo Aung at 5:06 AM No comments:
Posted by Pyiet Oo Aung at 5:03 AM No comments:
Posted by Pyiet Oo Aung at 4:57 AM No comments:
Posted by Pyiet Oo Aung at 4:53 AM No comments:
Posted by Pyiet Oo Aung at 3:36 AM 1 comment:
Posted by Pyiet Oo Aung at 7:20 AM No comments:
ကဗျာဆရာ ဖြစ်နေလောက်ပြီ....။ ။
Posted by Pyiet Oo Aung at 5:49 PM 1 comment:
လောကမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘောတရားများ
Posted by Pyiet Oo Aung at 4:18 PM No comments:
Note : သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့တွင် ကျွန်တော်ကဲ့သို့ ကိုယ်ချစ်သောမိဘ ဆရာသမားများနှင့် ခွဲခွာနေကြရသော သူငယ်များအားလုံးအတွက်...(၂၆.၁၀.၂၀၀၇)
Posted by Pyiet Oo Aung at 10:05 PM No comments:
အမေရိကန် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မက်အာသာရဲ့ ဆုတောင်း
အို.. ဘုရားသခင် ကျွန်ုပ်ကို သားတစ်ယောက် ဖန်ဆင်းပေးတော်မူပါ။ သူအင်အားချည့်နဲ့နေတဲ့အချိန်မှာ သူ့ကိုသူသိအောင် ကြံ့ ခိုင်သန်စွမ်းတဲ့သားမျိုး၊ သူကြောက်ရွံ့ တုန်လှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ သူ့ကိုသူ ရင်ဆိုင်နိုင်အောင် ရဲ စွမ်းသတ္တိနဲ့ ပြည့်ဝတဲ့သားမျိုး။
ရိုးရိုးသားသား ရှုံးနိမ့်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာ ကျေနပ်စွာလက်ခံပြီး ဘယ်တော့မှ ဦးမညွှတ်တဲ့သားမျိုး၊ အောင်မြင် မှုသရဖူ ဆောင်းနိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှိမ့်ချပြီး သိမ်မွေ့ တဲ့သားမျိုး၊ ကိုယ့်အတွက်(ကိုယ့်ဆန္ဒကိုသာ) သိတဲ့သူမျိုးမဟုတ်ဘဲ တစ်ခြားသူကိုပါ(တစ်ခြားသူရဲ့ ဆန္ဒကိုပါ) သိတဲ့သားမျိုး ပညာဗဟုသုတ အခြေခံကလေးအတွက်တော့ သူ့ကိုသူ သိစေချင်ပါတယ်။
သက်သောင့်သက်သာနဲ့ သာယာတဲ့ဘ၀မှာ၊ ရေသာခို အချောင်လိုက်တဲ့ လမ်းမျိုးမှာ မလျှောက်လှမ်းစေချင်ပါဘူး။ အခက်အခဲ အကြပ်အတည်းတွေ၊ ဖိစီးမှုတွေ၊ စိန်ခေါ်မှုတွေ၊ ဆူးညှောင့်တွေ ပြည့်နေတဲ့ လမ်းမျိုးမှာသာ လျှောက်လှမ်းစေချင်တယ်။
ဘ၀မုန်တိုင်းထဲမှာ ကြံ့ ကြံ့ ခံနိုင်အောင် လေ့လာသင်ယူပါစေ။ ဘ၀မှာ ရှုံးနိမ့်သွားတဲ့သူတွေအတွက် သနားကြင် နာစိတ်ရှိအောင် လေ့လာသင်ယူပါစေ။
ကြည်လင်ပြီး အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ နှလံးသားပိုင်ရှင်သားမျိုး၊ ရည်မှန်းချက် မြင့်မြင့်မားမား ထားရှိတဲ့ သားမျိုး၊ တခြား သူတွေအပေါ်မှာ ကွပ်ကဲခွင့် မရခင်မှာ သူ့ကိုသူ ပိုင်နိုင်စွာ ကွပ်ကဲထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ သားမျိုး၊ ရည်မှန်းချက် အနာဂတ်ပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိသည့်တိုင်အောင် ကုန်လွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကို မမေ့တဲ့(ဘ၀မမေ့တဲ့) သားမျိုးကိုဖန်ဆင်းပေးတော်မူပါ။
အဲဒါတွေ ပြည့်စုံသွားရင် ဟာသဥာဏ်ကလေးကိုပါ ဖြည့်စွက်စေချင်ပါတယ်။ ဒါမှ သူဟာ အသည်းအသန်ဖြစ်စေတဲ့ ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးမဆို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ လက်ခံနိုင် ဖြေရှင်းနိုင်မှာပါ။
မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချတတ်မှုတွေ ပေးပါ။ အမှန်တကယ် စစ်မှန်တဲ့ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်မှုမျိုးတွေ ပေးပါ။ ဆင်ခြင်တုံတရား နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပွင့်လင်းတဲ့ သိစိတ်အမြင်တွေ ပေးပါ။ နှိမ့်ချသည်းခံနိုင်စွမ်းဆိုတဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ခွန်အားမျိုးကိုပေးပါ။
Posted by Pyiet Oo Aung at 9:35 PM No comments:
အားလုံးဖတ်ပြီးသား စာအုပ်လေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။ ဒီနေရာမှာတင် Download လုပ်ပြီးဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်...။
Posted by Pyiet Oo Aung at 7:09 PM No comments:
ဆရာမင်းလူရဲ့ နောက်ထပ် နာမည်ကြီးစာအုပ်လေးတစ်အုပ်ပါ...။ ဖတ်ပြီးသူများထပ်မံဖတ်ရှုနိုင်ရန်နဲ့ မဖတ်ရသေးသူများ ဖတ်ရှုနိုင်ရန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။ ဒီနေရာမှာ Download လုပ်ပြီးဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Posted by Pyiet Oo Aung at 7:06 PM 1 comment:
ကျွန်တောချစ်တဲ့ စာရေးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဆရာမင်းလူ ရဲ့ စာအုပ်လေးပါ..။ အားလုံး ဖတ်ဖူးပြီးသား ဖြစ်ကျမယ်ဆို တာသိပေမယ့်..။ Ebook အဖြစ်သိမ်းထားသူများအတွက် တင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်..။ ဒီနေရာမှာ Download လုပ်ယူပြီးဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်...။
Posted by Pyiet Oo Aung at 7:03 PM No comments:
စာအုပ်ကောင်းလေးတစ်အုပ်ပါဘဲ..။ ကျွန်တော့လို ဒီလို စာပေမျိုးကို ဖတ်တတ်သူတွေအတွက် အလွန်သဘောကျ မယ့်စာအုပ်လေးပါ။ ဒီနေရာမှာဘဲ အလွယ်တကူ Download ချဖတ်ယူနိုင်ပါတယ်..။
Posted by Pyiet Oo Aung at 6:59 PM 1 comment:
ကျွန်တော့ရဲ့ အကြိုက်ဆုံးစာအုပ်လေးတစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ၈ တန်းနှစ်ကတည်းက ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ စာအုပ်လေးပါ..။ အခုတော့အားလုံး ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ အတွက်ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်ပါပြီ။ ဒီနေရာမှာ Download ချပြီးဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်..။
မှတ်ချက်။ ။ ကျွန်တော့်ဘ၀ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတော်တော်များများကို ဒီစာအုပ်လေး ဖတ်ပြီးကတည်းက ပြင်ဆင်ကျင့်သုံးခဲ့တာ အခုအချိန်အထိဖြစ်ပါတယ်..။
Posted by Pyiet Oo Aung at 6:51 PM No comments:
ကိုတာရဲ့လက်ရာ စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်..။ တွေးတောဆင်ခြင်မှုကို စိတ်ဝင်စားသူများ လောကကြီး၏ အမှန်တရားကို သိလိုသူများအတွက် အလွန်သင့်တော်မယ့် စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာဘဲ အလွယ်တကူ Download လုပ် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Posted by Pyiet Oo Aung at 6:47 PM No comments:
One of my favourite authors ပါ။ သစ္စာနီ ဆိုရင် Modern စာပေကို စိတ်ဝင်စားသူများ မသိသူမရှိကျပါဘူး။ ဒီနေရာတွင် Download လုပ်ပြီးဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်..။
Posted by Pyiet Oo Aung at 6:41 PM No comments:
ဆရာဆန်းလွင်ရဲ့ ထင်ရှားတဲ့လက်ရာ စာအုပ်တစ်အုပ်ပါ။ တွေးရတော်ရတာကို ၀ါသနာပါတဲ့.... World Philosophy ရဲ့သမိုင်းကို စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် လက်ကမချနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်ရမယ့် စာအုပ်လေး တစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာကနေ Download ချဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Posted by Pyiet Oo Aung at 6:34 PM No comments:
ဇော်ဇော်အောင် (PostModern Theory)
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Post Modern လောကမှာ Pioneers အများစုထဲက ထင်ရှားတဲ့ ဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်လေးကို ကျွန်တောဖတ်ဖူးခဲ့တာတော့ ကြာပါပြီ။ အခု ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းတွေပါ မျှဝေခံစားဖို့ အတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီနေရာတွင် Download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Posted by Pyiet Oo Aung at 6:29 PM No comments:
ကျွန်တော့်ရဲ့ အကြိုက်ဆုံးနဲ့ အလေးစားရဆုံး စာရေးဆရာဖြစ်ပါတယ်..။ အခုသူ့ရဲ့ Essay စာအုပ်လေးတစ်ခုကို အားလုံးမျှဝေခံစားနိုင်အောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီနေရာတွင် Download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်..။
Posted by Pyiet Oo Aung at 6:23 PM No comments:
အရှေ့မြို့ရိုးမှ မိုးရေစက်များ (တာရာမင်းဝေ)
ဆရာတာရာမင်းဝေရဲ့ လက်ရာလေးများကို အလွမ်းပြေဖတ်ရှုနိုင်ရန်တင်ထားပေးပါတယ်။ ဒီနေရာတွင် Download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Posted by Pyiet Oo Aung at 6:20 PM No comments:
ဘာသာရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့စာအုပ်လေး တစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာတွင် Download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Posted by Pyiet Oo Aung at 6:15 PM 1 comment:
Labels: Ebooks, Religious
Applications AIO CD VOl.1
နောက်ထပ် AIO Kit လေးတစ်ခုပါ..။ ကျွန်တော်ကတော့ AIO ကိုသုံးရတာ သဘောကျပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ သတိပေးပါရစေ..။ AIO ကိုတိုင်ကကို Virus သို့ Trojian တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်..။ ဒါကိုတော့ ကိုယ့်နည်း ကိုယ့်ဟန်နဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်...။
Posted by Pyiet Oo Aung at 5:34 PM No comments:
Labels: Download, Hacking
Proxy Anonimous Suffering
IP ကိုသာမက မိမိရဲ့ Proxy ကိုပါ Anonimous Suffering လုပ်လို့ရတဲ့ Software လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Keygen Location ပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်။
Posted by Pyiet Oo Aung at 5:12 PM No comments:
AIO Tools Kit
မိမိစက်၏ လုံခြုံရေးအတွက်ကော လက်တဲ့စမ်းချင်သူ ၀ါသနာရှင်များအတွက်ပါ အသုံးဝင်မယ် ထင်ပါတယ်...။
Posted by Pyiet Oo Aung at 4:59 PM 1 comment:
Multiple Google Talk သုံးချင်သူများအတွက်
Posted by Pyiet Oo Aung at 4:38 PM No comments:
Labels: Hacking, Video Clip
Using Winternal 2005
Posted by Pyiet Oo Aung at 4:35 PM No comments:
Easy Window Password Hacking
Posted by Pyiet Oo Aung at 4:31 PM No comments:
Hacking Administrator Password
Posted by Pyiet Oo Aung at 4:29 PM No comments:
Lime Wire Pro V4.14.10
ဒီ Software ကတော့ မိမိလိုချင်သော Music, Movie, Software, etc... စသည်ဖြင့်အားလုံးလိုလိုကို Website တွေမှာ သွားရှာစရာမလိုတဲ့ Software လေးပါ။ Torrent File တွေထက် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ Dowload လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Posted by Pyiet Oo Aung at 6:38 AM No comments:
ဒီ Software လေးကတော့ နာမည်ကြီးပါတယ်..။ ကိုယ်သုံးတတ်ရင် သုံးတတ်သလိုကို တော်တော်အကျိုးရှိမယ့် Software လေးပါ။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် Window Administartor Password ကိုတောင် Hack လုပ်လို့ရပါတယ်။ နည်းနည်းတော့ စိတ်ဝင်စားသွားမယ်ထင်ပါတယ်..။ ကျွန်တော့နေနဲ့ကတော့ Educational Support အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး တင်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူ အပေါ်မူတည်ပြီး ရရှိလာမယ့် မလိုလားအပ်သည့် ဆိုးကျိုးများကိုတော့ ကျွန်တော့အနေနဲ့ တာဝန်ယူမှာ မဟုတ်ပါဘူး..။ Bootable Cd လုပ်ဖို့အတွက် ISO ကိုတော့ Run ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်..။
Posted by Pyiet Oo Aung at 6:13 AM No comments:
တစ်ချို့သော ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းများကတော့ ဒီ Software ကိုမကြိုက်ကြကြောင်း ပြောကျပါတယ်..။ ကျွန်တော်ကတော့ သဘောကျပါတယ်..။သုံးရတာလည်း တော်တော်ကို အဆင်ပြေပါတယ်။ ကိုယ်တွေ့ အရပြောရရင် ကျွန်တော့ကောင်မလေးရဲ့ Laptop မှာသူ့အရင်ချစ်ချစ်က Run ပြီးတော့ ထောက်လှမ်းနေတဲ့ (ဟီး..ဟီး ဘာတွေသိသွားလဲတော့ မသိဘူး) spyware ကို ကောင်းကောင်း ရှင်းထုတ်သွားနိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်။ အရင်ကတခြား software တွေသုံးပြီးဖယ်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ဖူးပေမယ့် မရဘူးလို့ ကျွန်တော့ ကောင်မလေးကတော့ ပြောပါတယ်..။
Posted by Pyiet Oo Aung at 5:37 AM No comments:
Hacker (Divx Quality)
ခေါင်းစဉ်ကို ကြည့်ပြီးလန့်မသွားကြပါနဲ့။ အခုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းတွေလည်း ကြိုက်မယ် ထင်တဲ့ Movie လေးတစ်ခုရဲ့ အမည်ပါ။ သူတို့တွေ ဘယ်လို လက်စွမ်းပြခဲ့ကြ တယ်ဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်။
Posted by Pyiet Oo Aung at 5:30 AM No comments:
Hackers Toolkit 2005
Hacking ကိုမှ ၀ါသနာပါ ပါတယ်ဆိုသူများအတွက်တော့ ဒီ Software လေးကိုအရင်လက်တဲ့စမ်းကြည့်စေချင် ပါတယ်..။ ဟဲ ဟဲ...ကျွန်တော့စက်ကိုတော့ ချမ်းသာပေးကျဖို့ စောစောစီးစီး အသနားခံထားပါရစေ...။
Posted by Pyiet Oo Aung at 5:18 AM No comments:
Live Free Or Die Hard (2007 DIVX Quality)
Movie ကောင်းကောင်းကိုမှ ခံစားချင်သူများအတွက် Die Hard IV ထွက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ Fire Cell System ကိုအသုံးပြုပြီး FBI အပါအ၀င် New York မြို့ကြီးတစ်မြို့လုံးကို ဘယ်လို Hack လုပ်သွားတယ် ဆိုတာကို ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ကြည့်ရှနိုင်ပါတယ်။ Hacking ကိုဝါသနာပါသူများအတွက်လည်း ကြည့်တတ်မယ် ဆိုပါက ပညာရနိုင်စရာလေးတွေပါ ပါတယ်..။
Posted by Pyiet Oo Aung at 5:12 AM No comments:
လာပါပြီဗျား Antivirus ဆိုရင် Norton မှ ဆိုသူများအတွက်။ Norton Internet Security 2008 ပါ။ Crack နှင့်တကွ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Posted by Pyiet Oo Aung at 5:07 AM No comments:
လက်ရှိအသုံးပြုနေသော မိမိ Computer ၏ ကျန်းမာရေးကို အလေးထားတတ်တဲ့ သူများအတွက်ပါ။ အလွန်အသုံးဝင်သော Software လေးဖြစ်ပါတယ်။ Crack နှင့်တကွ Download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Kaspersky 7.0.0.125 Final
လူကြိုက်များ ရေပန်းစားနေတဲ့ Antivirus Sowtware လေးတစ်ခုပါ။ အားလုံးနှစ်သက် ကျေနပ်ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Posted by Pyiet Oo Aung at 4:51 AM No comments:
Window Xp sp3 V2.5 Final
- Updating Flash Player v9.0 > Flash Player v10
- Updating Media Player Classic v6.4.9.0 > Media Player Classic v6.4.9.0+ (Newer Build with Video Files association)
- Updating Microsoft Office 2003
- Updating Nero v7.2.0.3 Lite > Nero Burning v7.7.5.1 Micro
- Updating NOD32 v2.51.26 > NOD32 v2.70.39
- Updating PhotoFiltre v6.1.5 > PhotoFiltre v6.2.7
- Updating Process Explorer v10.06 > Process Explorer v10.21
- Updating Sun Java2 Runtime Environment v5.0.7 > Sun Java2 Runtime Environment v6.0.2
- Updating Win32Pad v1.5.10 > Win32Pad v1.5.10.2
- Updating Windows Live Messenger v8.0 > Windows Live Messenger v8.1.0178 (No Adds)
- Updating Winamp Pro v5.1 > Winamp Pro v5.35
- Updating Windows Media Player v11 > Windows Media Player v11.0.5705.5043
- Updating WinRAR v3.51 > WinRAR v3.7 Corp
- Updating XPize v4.4 > Xpize v4.7
- Updating Yahoo! Messenger v7.5.0.814 > Yahoo! Messenger v8.1.0.415
- Updating WPI 5.0 > WPI v5.6
- Updating Wallpaper Changer
- Updating the Autostart Menu dramatically
- Replacing ACDsee > XnView v1.91.3 (Full Version)
- Replacing Adobe Reader > FoxIt PDF Pro Reader v2.1 (Super Fast with Editing Capability)
- Replacing IDM > Orbit Downloader v2.0.7 (which can download streaming Videos like Youtube)
- Replacing K-Lite Mega Codec > Vista Codec Package v4.4.9 - Replacing PhotoFiltrer > Paint.Net v3.10
- Replacing XoftSpy > SpyBot Search & Destroy v1.4
- Replacing Zume Deluze with Pixelus Deluxe!
- Adding DaemonTools v4.10
- Adding Driver Genius 2007 (for Drivers BackUp into One Exe File)
- Adding TuneUp Utilities 2007 v6.0.2311
- Adding 28 Boot Screens (Run by the above proggy)
- Adding HWiNFO32 v1.74 (Detailed Info about your Hardware)
- Adding HiJack This v2.0.2
- Adding FileLocator Pro v4.0 (Super Fast File Search Utility on you PC)
- Adding Foxit PDF Editor v1.5
- Adding Internet Explorer v7.0.5730.11 Final!
- Adding Internet Explorer SpellChecker
- Adding IE7pro v0.9.16 (Extra Pro options for IE7)
- Adding VerbAce - English Arabic Dictionary 2007
- Adding RainLander v2.2 - Adding Screen Marker v0.1
- Adding doPDF (for making PDF files)
- Adding Control Panel Items
- Adding TreeCopy v1.11 (let you Copy Only Folder Structure without Files)
- Adding All NirSoft Proggies
- Adding All Sysinternals Proggies - Fixing the Advanced WMI Thing - Fixing the Issue of ArabicMui with Xpize - Fixing Minor Bugs
Posted by Pyiet Oo Aung at 4:44 AM No comments:
Nero 8 Ultra Edition V8.1.1.0
Applications included in Nero 8:
Nero Mobile – Media Center for Mobile DevicesNero Home3– Media Management System
Nero InfoTool5– Drive and Disc Analysis InCD5– Packet Writing Solution SecurDisc Viewer – View SecurDisc protected files
Posted by Pyiet Oo Aung at 4:29 AM 1 comment:
Relation Of Love And Energy
Have you ever learned about Energy?
Love is Like the Engery ...
By using first law of energy
Love can't created nor destroyed ...
By using second law of energy
But it can change one form to another so .....
Don't try to create or destroy love yourself......
And ..... remember ...
It gonna change soon ....!
Posted by Pyiet Oo Aung at 3:36 AM2comments:
Labels: English Poems
Let the tears fly away .....
Let the sorrow pass away ....
Let the miseries far away ....
Let the trouble flow away ....
Let the fear roll away .... and ....
Let your beloved run away .... soon ....
Everything gonna be substituted by their ....
Opposites ..... !
Posted by Pyiet Oo Aung at 3:36 AM No comments:
"Yesterday" was killed by "Today"
He will be killed ....
Posted by Pyiet Oo Aung at 3:35 AM 1 comment:
A love program is trying to install on your heart ....
Maybe this program can make you "Smile" or .......
Sometimes, "Cry" .... !!!
If you can accept, then press .....
OK .... else
CANCLE ... !
Posted by Pyiet Oo Aung at 3:35 AM3comments:
The Way To Forget Someone
We need to remember everything.....
Posted by Pyiet Oo Aung at 3:34 AM No comments:
Who we are................?
What are we doing......?
Where are we going.....?
Why are we doing........?
How can we do............?
Whose way we use.......?
To whom we gave.........?
When will we end..........?
Journey To The Life
You are changing.....
I m changing.......
Everything is changing.....
There's only one thing which will never changed....
It's " Changing".....
Changing will never changed....
If you agree that......,
Come on let's go....,
Let's start our journey to the "Life"....!
Posted by Pyiet Oo Aung at 3:33 AM 1 comment:
Putablack T-shirt...
Wearajean pan.....
Fit your "All Star".....
Take your bag.....
Hold your valentine's hand ....
Face your "Challenges" ....!
Taking Revenge Is Not A Curse
Taking revenge is....
Notacurse....!
It is givingapresent.....
What he demanded himself...
With his action..
He will get "Regrad"....
As his reward...at that time...!
Posted by Pyiet Oo Aung at 3:32 AM No comments:
Posted by Pyiet Oo Aung at 3:30 AM No comments:
Posted by Pyiet Oo Aung at 3:29 AM No comments:
မင်းခြေရာတွေတောင် ထင်နေပါပြီကွာ...။ ။
Posted by Pyiet Oo Aung at 3:29 AM 1 comment:
ဓာတ်ဆီတွေနဲ့ ပါလားကွာ...။ ။
Posted by Pyiet Oo Aung at 3:28 AM No comments:
Posted by Pyiet Oo Aung at 3:26 AM No comments:
"Data" တွေပါ ပါသွားခဲ့တယ်.....။ ။
Posted by Pyiet Oo Aung at 3:25 AM No comments:
ဘယ်သူမှ မသိနိုင်ဘူး ...
Posted by Pyiet Oo Aung at 3:24 AM No comments:
"အချစ်ဆိုတာ အိပ်ပျော်နေတုန်းဘဲ ကောင်းတာ" တဲ့
အသိကလေး တစ်ချက် ၀င်လာတာနဲ့
Posted by Pyiet Oo Aung at 3:23 AM No comments:
လိုချင်တာတစ်ခု (သို့) ဖြစ်ချင်တာ တစ်ခု ဖြစ်ဖို့
Posted by Pyiet Oo Aung at 3:21 AM No comments:
Devil & Church
Let the Devil get into the church, and he will soon be on the alter.
Posted by Pyiet Oo Aung at 6:28 PM 1 comment:
Head & Hat
He who has no Head doesn't need hat.
Posted by Pyiet Oo Aung at 6:26 PM No comments:
Door & Head
Don't carry your head to high, the door is too low.
Posted by Pyiet Oo Aung at 6:25 PM No comments:
Robber & Book
There is no robber worse thanabad book.
Posted by Pyiet Oo Aung at 6:22 PM3comments:
Courage & Legs
He who has no courage should have legs.
Posted by Pyiet Oo Aung at 6:21 PM No comments:
Destroy all passions when you light Buddha's lamp.
Posted by Pyiet Oo Aung at 6:19 PM No comments:
You should not swallow more beliefs than you can digest (Analyse).
Posted by Pyiet Oo Aung at 6:17 PM No comments:
Light still means light, though the blindman doesn't see it.
Posted by Pyiet Oo Aung at 6:16 PM No comments:
What you see in the mirror is not in the mirror.
Posted by Pyiet Oo Aung at 6:15 PM No comments:
Be silent, or say something that is better than silience.
Posted by Pyiet Oo Aung at 6:14 PM No comments:
God knows the truth,.....but he waits....(Leo Tolstoy)
Posted by Pyiet Oo Aung at 6:13 PM No comments:
What is the use of running, when you are on the wrong road?
Posted by Pyiet Oo Aung at 6:12 PM No comments:
Proverbs are the wisdom of ages.
Posted by Pyiet Oo Aung at 6:11 PM No comments:
One "Today" is more sweet than ten "Tomorrows"
Posted by Pyiet Oo Aung at 6:10 PM No comments:
For long.....is not forever.
Posted by Pyiet Oo Aung at 6:09 PM No comments:
Curses are like reactions, they come back to the place where they had been set out.
Posted by Pyiet Oo Aung at 6:07 PM No comments:
Patience isaflower that grows not in every garden.
Posted by Pyiet Oo Aung at 6:06 PM No comments:
Whenaman is in happiness, he does not hear the clock's strike.
Posted by Pyiet Oo Aung at 6:05 PM No comments:
There isa"But" in everything.
Posted by Pyiet Oo Aung at 6:04 PM No comments:
Sins & Debts
Sins and debts are always more than we think them to be.
Posted by Pyiet Oo Aung at 6:03 PM No comments:
Everything comes in time, to the man who knows how to wait.
Posted by Pyiet Oo Aung at 6:02 PM No comments:
Time is the greatest magician.
Posted by Pyiet Oo Aung at 6:01 PM No comments:
Life & Stairs
The life is stair case ; some are going up, some are coming down.
Posted by Pyiet Oo Aung at 6:00 PM No comments:
Word & Sword
Sometime in the world, words hurt than swords.
Never let anyone see the bottom of your purse or your mind.
Posted by Pyiet Oo Aung at 5:59 PM No comments:
The old friends and the old wines are the best.
Posted by Pyiet Oo Aung at 5:57 PM No comments:
Never write what you dare not sign.
Posted by Pyiet Oo Aung at 5:56 PM No comments:
Lend only what you can afford to lose.
Posted by Pyiet Oo Aung at 5:54 PM No comments:
One man's fault is another man's lessons.
Posted by Pyiet Oo Aung at 5:53 PM No comments:
Inawar,asoldier can be given two orders, to fight or to surrender.
Posted by Pyiet Oo Aung at 5:51 PM No comments:
Harvest comes not everyday, though it comes every hear.
Posted by Pyiet Oo Aung at 5:50 PM No comments:
How far can you fly with broken wings?
Posted by Pyiet Oo Aung at 5:49 PM No comments:
Fly with your own wings.
Posted by Pyiet Oo Aung at 5:47 PM No comments:
Adapt yourself to the times.
Posted by Pyiet Oo Aung at 5:46 PM No comments:
The truth is sacrificed by too much disputation.
Posted by Pyiet Oo Aung at 5:44 PM No comments:
It is hard to sail when there is no wind.
Posted by Pyiet Oo Aung at 5:43 PM No comments:
Posted by Pyiet Oo Aung at 5:42 PM 1 comment:
Posted by Pyiet Oo Aung at 5:42 PM No comments:
Nothing weights lighter thanapromise.
Posted by Pyiet Oo Aung at 5:41 PM 1 comment:
Extreme is dangerous.
Posted by Pyiet Oo Aung at 5:40 PM No comments:
Ability becomealittle amount when there is no opportunity.
Posted by Pyiet Oo Aung at 5:37 PM No comments:
Internet Download Manager 5.11 ကို Crack နှင့်တကွ ဒီနေရာတွင်ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Posted by Pyiet Oo Aung at 4:22 AM No comments:
You should not swallow more beliefs than you can d...